Locomotives | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
Halkapınar 'Grievances End
Fahadisoana lehibe iray lehibe nataon'ny machinista no voavaha tamin'ny fanatanterahana sy ny tolona nataon'ny Pegawai ny Fitaterana-Sen. Raha ny fantatra, ny fidirana amin'ny lamasinina hanome fiara lamasinina mandritra ny fotoana İzmir Halkapınar (Halkapınar Depot - Balıkesir, Uşak, Denizli) [More ...]
Mitombo ny fivezivezena Fleet TCDD fitaterana TCDD
Eo ambany fitarihan'ny TaleD ny Tale Jeneralin'ny Fitaterana TCDD Erol Arıkan sy ny Tale General TÜLOMSAŞ Hayri Avcı, dia nanao fivoriana tao amin'ny TÜLOMSAŞ ny delegasiona tao anatin'ny faritry ny fandaharana manavao ny fiaramanidina fiara. Mandritra ny fihaonana, ny fanovana ireo karazana valala vita amin'ny diesel ho lasa lokomototra elektrika mandritra ny vanim-potoana 2020-2022, diesel, [More ...]
Nizara fizarana Locomotive tany amin'ny CRRC i Vossloh
Ny orinasa orinasa Vossloh Locomotive miasa any Kiel dia vita tamin'ny martsa 2018. Vossloh's CRRC, ny orinasa sinoa CRRC, miaraka amina trano rehetra misy ny lokomototra, ao anatin'izany ireo fiara misy milanja kely sy salantsalany vita amin'ity orinasa ity. [More ...]
Fiaran-tsambo ao Balıkesir
Fiaran-dalamby ao Balıkesir tamin'ny volana Mey lasa teo, nanofa tamim-pahanginana tao amin'ny tanànan'i Yunus Emre ao Manisa ary avy eo dia nahatonga fihetseham-po lehibe tamin'ny fiaran-dalamby niverina tany Balikesir. Taorian'ny fanamboarana ny lamasinina tany Balıkesir dia nofaina tao amin'ny Kaominina Yunus Emre [More ...]
Ny KARAKURT teratany tiorka voalohany: KOLAKURT: 4 aprily 1957, Atoa Adnan MENDERES, izay nanatrika ny lanonam-panokafana ny Cement Factory any Eskişehir (Aprilukurhisar) tamin'ny aprily 5, nanome voninahitra ny atrikasa State Railways Draw Frame tamin'ny volana aprily ary indrindra ireo mpisolovava miaraka amin'ny fananganana orinasa rehetra. [More ...]
Miverina any Balıkesir ny fisetran-tsambo mahery vaika natolotry ny Tale Jeneralin'ny TCDD mankany amin'ny Kaominikan'i Yunus Emre ao Manisa. Ny solombavambahoaka AK Partista Balikesir Mutlu Aydemir, miaraka amin'ny fanazavany momba ny fiaran-tany nomena an'i Manisa'ya fotoana fohy lasa izay dia nanambara ny fiverenan'ny Balikesir. Nanao ny azy i Aydemir [More ...]
Tale Jeneralin'ny TCDD, hita ao amin'ny TÜLOMSAŞ
Tale Jeneralin'ny TCDD Ali İhsan Uygun, TÜLOMSAŞ dia nahita fanaraha-maso teo amin'ireo trano. Ny tale Jeneralin'ny TCDD Ali Ihsan Uygun, izay nahazo fampahalalana momba ny famokarana fitaovam-piadiana nasionaly sy ny lokomotiva avy ao amin'ny TULOMSAS Jeneraly General Hayri Avci, dia tao amin'ny Museum TULOMSAS, 1961 [More ...]
General Tale Tiorka State lalamby nanofa Yunusemre Monisipaly manisa dia niverina tany amin'ny etona Balikesir loha masiny. TCDD amin'ny 2 557 arivo kilao ny fifanarahana nanao sonia teo amin'ny Kaominina Yunusemre miampy iray lease iray taona ho takalon'ny KDV ary nentina tany manisa [More ...]
CHP Akın: 'Inona ny tranon'ny Mpisambotra no manana fiaran-tany?'
Ahmet Akın, borç Misy tanàna iray trosa. Ny kaominina dia manasonia ny protocol amin'ny TCDD ary manofa ity fiara ity mandritra ny herintaona miaraka amin'ny 2 arivo 557 lira plus VAT. Tsy mety amin'ny antony izany! Nahoana no manofa? Ny tanjona dia baolina tokotany 20 ihany [More ...]
Ny baolina manan-tantara any Balıkesir dia nalefa tany Manisa
Ny fiaran-dalamby nostalgic naseho tao amin'ny balıkesir Gar basin dia nalefa tao Manisa tamin'ny Directeur Généralat de TCCD. Ny 'Black Train', izay nanompo tao Balıkesir nandritra ny taona 1960 ary nipoitra tao amin'ny basin'i Balıkesir Gar, dia efa nanodidina ny taona 20 hatramin'ny namoahany ny tolona amin'ny teknolojia. [More ...]
Iza no te ho olom-pirenena iray?
Iza no te ho lasa millionaire? Ny fanontaniana napetrak'ilay fifaninanana dia nampahatsiahy antsika ny famokarana fiara voalohany sy ny firenena. Ny tantara momba ny lozam-pifamoivoizana an-tsokosoko nosoratana tamin'ny taratasy volamena ho an'ny tantara an-dalanay dia ireto manaraka ireto; Adnan Menderes 1957 ao Ankara [More ...]
DE 10000 Nasionalin'ny Elektrika Nasionalin'ny Lalana Eurasia 2019 Segilendi
Ny mpiantoka, ny Torkia ihany sy izao tontolo izao lehibe indrindra 3. Ny Eurasia Rail dia natao tao amin'ny seranam-piaramanidina 2019 sy ny lamasinina. Ny tsena, izay sehatra iraisam-pirenena momba ny mpanapa-kevitra sy ny fivoarana farany ao amin'ny sehatry ny arabe, [More ...]
Ny lokomotiva dia nomerika miaraka amin'i TÜLOMSAŞ
voalohany dia nanapa-kevitra ny hiova fo amin'ny sehatra nomerika ny loha masiny rafitra araka ny tondrozotra, ary mamaritra ny vokatry ny fanadihadiana sy ny atrikasa notontosaina anatin'ny Biraon'ny Digital Fiovam-po Natsangana tao Tulomsas tokony ho 1,5 taona lasa izay. Eto, Torkia ny voalohany sy ny firenena an-toerana [More ...]
Hipoitra amin'ny 'Rail Train Station' ve ny 'Black Train'?
Misy fiara fitateram-bolo maneho amin'ny fiarandalamby Burdur, izay niandry ny fiaran-dalamby nandritra ny taona maro. Ny famindrana ny toeram-piantsonan'ny fiaran-dalamby ao an-tanàna mankany amin'ny indostrian'ny orinasa, ary ny fampiharana ny drafitry ny fametrahana ny lalamby, ity fiara fitaterana lamasinina ity miaraka amin'ny fanambarana ny 'fiaran-dalamby' avy any amin'ny toerana izay [More ...]
Famaritana ny fiaran-dalamby nalain'ny TCDD
Tale Jeneralin'ny TCDD, distrika Sincan ao Ankara, nitohy ny fikarohana ara-teknika momba ny fanonganana ny fiaran-dalamby nitondra entona ary ny fanadihadiana ara-panjakana dia nanomboka. Tale Jeneralin'ny TCDD dia nilaza fa: İzmit Today (14.03.2019) dia miasa eo amin'ny lalamby mahazatra eo anelanelan'i İzmit sy Ankara. [More ...]
Tao Ankara, nivoaka ny fiaran-dalamby ny fiara
Tany amin'ny faritr'i Ankara, faritra Sincan ao Çağlayan, ny làlambe nitondra ny fiara mpamokatra solika dia nidina. Ny filohan'ny tsindry BTS Ankara Özdemir, "ny fantsom-panitsiana nandritra ny asan'ny scissors ho any amin'ny araben'ny lamasinina tavela amin'ny lamasinina," hoy izy, ny distrikan'i Sincan ao Ankara [More ...]
Fiara mpitondra fiara ao Ankara
Ao amin'ny distrikan'i Sincan ao Ankara, ny fiaran-dalamby mitondra alika dia nidina. Raha tsy nisy ny namoy ny ainy na ny ratra, dia tsy azo natao ny fiarandalamby nandritra ny ora 2. Araka ny vaovao azo, ny famantaranandro 01.30 dia miakatra eo anelanelan'i Ankara Gar sy Sincan Station [More ...]
Ireo Lozam-piaramanidina Voalohany ao amin'ny Tantara Tiorka Bozkurt sy Karakurt
Ireo Lozam-piaramanidina Voalohany ao amin'ny Tantara Tiorka Bozkurt sy Karakurt. Bozkurt sy Karakurt, ny fiara misy anay voalohany dia efa misotro ronono, miandry ny mpitsidika an'i Boz. Raha ny sehatry ny indostria ao Eskişehir no namolavola azy dia heveriko fa geliş [More ...]
Fandefasana entana avy any Malatya
TCDD nisintona fiara iray teo akaikin'ny Railway Malalya. Tsy nisy fiantraikany teo amin'ny fiainana, fahavoazana amam-paingam-pandeha sy lamasinina. Araka ny voalazan'ny vaovao, dia manamboatra toeram-piofanana eo an-toerana momba ny toeram-piofanana ao Yesiltepe, dia avy amin'ny antony tsy voafaritra [More ...]